Helitaanka wargelinta ku bar xaaladda waa feature aad u caanka ah ee nidaamka in inconspicuously ka hawlgala oo dhan. Waxay ka dhigaysa mid aad war ku saabsan hawlaha ugu dambeeyay ama dhacdo in aad u baahan tahay in ay qaado tallaabo deg deg ah. Waxaa jira afar siyaabood oo aad u soo sheegto:
• Play dhawaaq
• Xaaladda Ogeysiinta Bar
Qeybta 1: sida loo demiyo wax ogaysiis ah oo aan wax Tool Qeybta 2: Top 3 Android Notifications Manager Apps in Maamul Notifications ku yaalla Qeybta 3: Download iyo Maamul gaadhsiin Android Apps in hal meel ah
Qeybta 1: sida loo demiyo Notifications aan Tool kasta
Si kastaba ha ahaatee, marar badan farriimaha u muuqdaan kuwo in yar oo aad u diiqayo. Waxa uu helo mid aad u dhibsado marka aad ogtahay in farriimaha aad hesho ma aha xataa mid waxtar leh. Waxaad iska xidhi karin gebi ahaanba qalabka Android aad. Halkan sida aad u samayn.
Talaabada 1: Separate iyo kala soocid ku Apps ku salaysan ay Muhiimada
Marka aynu ka bilaabi aad hoggaaminayo goobaha, waa in aad eegno barnaamijyadooda aad soo bixi in qalab aad iyo doorto kuwa in aad runtii u baahan tahay in laga war ku saabsan waqtiyada oo dhan. Si loo fududeeyo, waxaad kala kartaa ilaa saddex qaybood:
Aad u muhiim ah, in aad dooneyso in aad hesho ogeysiin ka Chine, kuwaas oo qiimo kasta. Kuwani waa in ay ka mid gariirka, suldada, dhawaaqa iyo wax kasta oo kale iyo sidoo kale. Adeeg gaaban Fariin ay la socdaan Rasuullo deg dega ah, email shaqada, jadwalka iyo in-liiska yeela barnaamijyadooda guud ahaan geli this category.
In ka yar oo muhiim ah: liis ka kooban yahay kuwa Chine in aad mararka qaarkood isticmaalaan, laakiin ma doonayo in aan la soo dhibtay oo farriimaha hadda kasta oo markaas. Chine guud ahaan waxaa ka mid ah shabakadaha bulshada sida Facebook, Twitter iyo Internet Rasuullo.
Aan waxtar lahayn: Qaybtan waxaa ku noqon lahaa kuwa aad doonayso farriimaha in lagu gebi ahaanba la demiyo. Waxay ka kooban yihiin kulan oo Chine dhif ah loo isticmaalo.
Talaabada 2: demiyo ah wax ogaysiis ah ee Category kasta Sida ay muhiimadda
Oo dhan barnaamijyadooda Android qiyaar u leeyihiin inay maareeyaan goobaha ay gaadhsiin si gaar ah. Sidaa awgeed, si ay u qabsadaan goobo wargelinta ah ee app gaar ah, waxaad u baahan tahay in la beddelo goobaha wargelinta sida ay qaybaha aad samayso.
Aad u muhiim ah: farriimaha ayaa la rejeynayaa inay ON noqon wax kasta in this category maxaa yeelay aad dooneyso in ay u muuqan in sharciga aad bar, uga dhawaajiya, iyo inay gariiraan si aad u joogo meesha ugu sareysa waxaa ka mid ah tusaale ahaan at kasta. Short Messages qaado sida tusaale. Short Messages-Settings-Notifications Open.
In ka yar oo muhiim ah: Wixii barnaamijyadooda ku hoos this category, aad rabto in aad noqon farriimaha ku saabsan laakiin ay u sii ka birqaya.
Aan waxtar lahayn, maxaa yeelay, halkan barnaamijyadooda ka, qaado xorriyad buuxda loo damiyo farriimaha dhammaan. Sida waxa aad sameyn la mid aad u muhiim ah, kaliya dami farriimaha ee.
Qeybta 2: Top 3 Android Notifications Manager Apps in Maamul Notifications ku yaalla
Haddii aad qabto barnaamijyadooda badan oo farriimaha demiyo, markaas waa in loo naxo dami iyaga ka mid ah ka dib markii mid ka mid ah. Iyada oo taageero ka Chine oo kale, waxaad si fudud u reserved kartaa gariirka, midabka LED, tirada aaminin yeelaan, ringtone iyo xitaa bareeg u dhacda inta u dhaxaysa ogeysiis kasta. Sidoo kale, haddii app ay la socotay ka saaraysaa wargelinta, ay si toos ah u joojiyay. The Ogeysiinta Android app Tababaraha kooxda liiska ugu fiican ee ka kooban oo ka mid ah kuwa soo socda:
Tababare Ogeysiinta soo noqnoqota 3.1 / 5 Free
Ogeysiinta Manager Lite 3.5 / 5 Free
Notifications Off 4.3 / 5 Free
1. Maareeyaha Ogeysiinta ay deganaayeen qoysas
Cabbirka app ma uu aad u ballaaran oo la baaxadda 970 KB. Version xorta ah ee app tani ay tahay mid aad u jecel yihiin 10,000 - 50,000 rakiban ilaa taariikhda. Qaybtan hadda socota 1.8.27 waa mid aad ka jawaabaan sida codsigan siinayaa xoriyadda configuring farriimaha soo noqnoqota u app kasta oo lagu rakibay qalabka la jimaynta gaadhsiin Android caadiga ah. Qabaal Wargelinta waxa loogu Android kuu ogolaanaysaa inaad bedesho iyo Sooca ringtone kala duwan, midabka LED, gariirka iyo bareeg waqtiga u dhexeeya ogeysiis kasta oo ka codsiga hal. App Tani waa la jaan qaada iskageliyay Watch iyo sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ka saarto xayeysiiska.
Download Manager Ogeysiinta ay deganaayeen qoysas ka soo Google Play Store >>
2. Wargelinta Manager Lite
App Tani waxay horyaal u tahay ee fasalka ka mid ah maamulayaasha gaadhsiin Android. Iyada oo taageero ka app this, waxaad noqon kartaa gebi riixdey xitaa marka aad illoobeen inay noqon qalab aad on hab aamusan. Iyadoo app this, waxa aad maamuli kartaa dhawaaqa iyo digniinaha codsiyada kala duwan sida laguugu sahlo. Iyo sida aan soo sheegnay, dhammaan faahfaahinta ku saabsan kalasooca barnaamijyadooda aad sida ay muhiimadda, app this kuu soo sheegi doono si sax ah sida aad u kala jeceshahay. Waxaad si fudud ula socon karo jadwalka of qalab aad iyo hubi oo ku saabsan dhacdooyinka ku saabsan inuu ka dhaco mustaqbalka dhow yihiin. Ka sokow, waxaad si fudud u qabsato kartaa mugga oo ka mid ah farriimaha iyo digniinaha. Dhab ahaantii, waxaad samayn kartaa mugga profiles oo dheeraad ah sida in aad jadwal waqti.
Download Ogeysiinta Manager Lite ka Google Play Store >>
Iyadoo Notifications Off, waxaad ku dari kartaa badan profiles iyo dooro mid ka mid ah si loo joojiyo farriimaha la mid click. Waxa kale oo ay si toos ah disables farriimaha markii Chine waxa loo xiraa. Helitaanka app sidoo kale waa u fududahay la baadi magaca in bar raadinta. App wuxuu leeyahay seddex hababka, default, shaqada iyo habeenkii. Haddii aad doorato in ay ka shaqeeyaan habeenkii, farriimaha si toos ah u noqon doonaa ama la dodo. Inkastoo dadka qaarkood ay sheegeen in ay joojiyaan lahaa shaqeeya haddii aad beddesho ROMS, app waa mid fudud oo degdeg ah si ay u isticmaalaan.
Download Notifications Off ka Google Play Store >>
Qeybta 3: Download iyo Maamul gaadhsiin Android Apps hal meel
Haddii aad rabto in aad kala soo bixi wax kasta oo Chine maamulka gaadhsiin Android, waxaad riixi kartaa download ka link baahisey in qayb ka mid ah 2. In ka badan in ku sameeyo, waxaad u tagi kartaa si Wondershare MobileGo for Android (version Windows). Waxa aad siisaa awood ay uga soo bixi, rakibi, uninstall, gurmad, aragtida iyo wadaagaan barnaamijyadooda wargelinta ku haboon iyo si fudud. Dadka isticmaala Mac, fadlan isku day Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waxa kale oo oggolaanaysa in aad maamulato barnaamijyadooda gaadhsiin, ay ka mid yihiin xiridda, uninstalling, dhoofinta iyo arkaysid.
Phone Android kaabta & Soo Celinta 1 Click
Nuqul Xogta laga Nokia in Android
Lugood Music inay Device Android dhaqaaq
> Resource > Android > Manager Ogeysiinta Top 3 Android: demiyo dhibsado Notifications Effortlessly